Siyini isichotho futhi sakhiwa kanjani? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezinhlobo eziningi zemvula ezinokuwa futhi ngayinye inezici ezikhethekile. Sesivele sihlaziye eminye efana ne- nieve futhi i imvula. Namuhla kufanele sikhulume ngakho isichotho. Impela, sekungaphezu kwesisodwa umangazwe yisichotho ngesikhathi esifushane. Lawa ngamabhola eqhwa amancane awela kanzima, adala umonakalo emadolobheni nasezitshalweni futhi ngokuvamile ahlala isikhashana.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi isichotho sakhiwa kanjani futhi sinamiphi imiphumela? Sizokuchazela ngokuningiliziwe.
1 Yini isichotho
3 Inqubo yokufaka isithonjana nemvula
4 Izinhlobo ezahlukene zesichotho
Uma wake wasibona isichotho, ubonile ukuthi yisichotho esincane seqhwa esiwela ngesimo seshawa. Imvamisa kwenzeka nganoma yisiphi isikhathi sonyaka futhi iwa ngobudlova. Ngokuya ngosayizi wala matshe esichotho, umonakalo mkhulu noma mncane. La ma-granules noma amabhola e-ice aqukethe imvula ifomu eliqinile ngenxa yokuba khona kwezimo ezahlukahlukene zomkhathi ukuthi sizobona kamuva.
Ziyizingcezu eziphelele zeqhwa eliwa esibhakabhakeni. Kwezinye izimo, ukutholakala kwamabhola amakhulu eqhwa kutholakele, abakubiza i-aerolite. Kodwa-ke, lokhu akungeni kulesi sihloko, ngoba ubukhona baso buyangabazeka futhi bungaba ngumphumela wehlaya kunesimo sezulu.
Amanzi afriziwe esichothweni avame ukuncibilika esikhathini esifushane ngemuva kokuwela phansi. Kungaba ngenxa yamazinga okushisa ambient noma ngenxa yokushayeka uqobo. Udlame lawa amabhola eqhwa aholele kulo ukuphihlizwa okuningi kwamawindi, amawindi ezimoto, imithelela kubantu nokulimala kwezitshalo. Isichotho nobungozi baso buxhomeke ekuthini siwele kangakanani nokuthi sihlala isikhathi esingakanani. Kunezikhathi lapho isichotho singawi ngodlame, kepha kubukeka njengomcimbi ongajwayelekile. Kulezi zikhathi akulimazi.
Manje sizohlaziya ukuthi isichotho sakhiwa kanjani ukuze la mabhola eqhwa abunjwe emafwini. Isichotho ngokuvamile sihambisana neziphepho ezinamandla. Amafu adingekayo ekwakhekeni kwesichotho amafu e-cumulonimbus. Lawa mafu akhula aqonde mpo lapho umoya oshisayo ukhuphuka ebusweni. Uma umoya obandayo ogijima ngaphezulu uhlangana nolunye uquqaba lomoya ofudumele, uzokwenza ukuthi unyuke ngoba awuminyene kakhulu. Uma ukwenyuka kuphakeme ngokuphelele, amafu amakhulu afana ne-cumulonimbus azokwakhiwa.
Amafu weCumulonimbus nawo aziwa njengamafu emvula noma amafu esiphepho. Lapho ubukhulu bomoya bukhuphuka ukuphakama, buyehla kwehle izinga lokushisa ngenxa ye-gradient ezishisayo yemvelo. Njengoba sazi, izinga lokushisa liqala ukwehla ukuphakama njengoba kwenza nengcindezi yasemkhathini. Lapho nje ifinyelela ezindaweni ezinamazinga okushisa angaphansi kuka-zero degrees, iqala ihlangane ibe ngamaconsi amanzi amancane akha amafu.
Uma amafu ekhula amile, kungenzeka ukugcina inani elikhulu lalezi zinhlayiya, okwenza ukungazinzi komkhathi, okungenzeka, kugcine kudedele isiphepho. Lapho izinga lokushisa ngaphakathi kwefu liphansi kakhulu, akhiwa kuphela amaconsi amanzi, kunalokho, kwakheka amaconsi eqhwa. Ukuze lokhu kwakhiwe, kudingeka i-hygroscopic condensation nuclei, efana nezinhlayiya zothuli, izinsalela zesihlabathi, izinhlayiya ezingcolisayo noma amanye amagesi.
Uma inani lamabhola eqhwa lidlula isisindo somoya okhuphukayo, lizogcina lishisa ngamandla ngaphansi kwesisindo salo.
Inqubo yokufaka isithonjana nemvula
Isichotho sakha kancane kancane emafwini. Iyakwazi ukuhlala intanta njengoba kunomoya wamanje oya phezulu oqhubekela phezulu futhi uqhubeka nokwakha ifu elithuthukayo ngokuya phezulu njengoba umoya oshisayo uhlangana nengxenye ebandayo futhi ujiye. Yile ndlela ifu elikhula ngayo liba likhulu futhi likhulu. Lapho isichotho sisinda kakhulu ukunqoba ukumelana ne-updraft, sigcina sesishesha.
Enye indlela isichotho esenzeka ngayo ukuthi i-updraft yehlise ijubane futhi ingabi nokumelana nokuntanta emafini. Isichotho sinzima impela futhi uma singena esikhaleni sithola amandla amakhulu size sifike phansi. Ngokuya ngenani lamabhola eqhwa akhiwe efwini, sizothola imvula enobudlova futhi ehlala isikhathi eside noma ngaphansi.
Izinhlobo ezahlukene zesichotho
Kukhona umehluko phakathi kosayizi wamabhola esichotho. Ezinye zincane kakhulu futhi ziyakwazi ukuhamba emafini. Njengoba kwakhiwa okuningi noma amazinga okushisa eqhubeka ukwehla, iqhwa liyakhula, njengoba amaconsi esondela enhlanganweni ye-condensation. Kukhona amatshe esichotho angalinganisa amasentimitha ambalwa ububanzi futhi angowokuqala ukuwa. Ngalesi sizathu, imvamisa, lapho kuqala isichotho, kulapho sibona khona amatshe esichotho amakhulu kunawo wonke futhi yiwona asibeka kakhulu. Njengoba imvula yesichotho iqhubeka, usayizi uyancipha.
Phakathi komonakalo osubhaliwe sithola inhlekelele enkulu eyenzeka edolobheni laseNdiya iMoradabad ngo-1888. Lesi sichotho senziwa ngamatshe eqhwa aphelele adala ukufa kwabantu abangu-246 ngokuthinteka ngqo ekhanda. Abanye bashonele khona lapho kwathi abanye balimala kabi abakubangele.
Ngo-2010 ibhola lesichotho elikhulu kunawo wonke laqoshwa kuma-4,4 kilos ngesisindo. Lesi sichotho senzeke eViale, e-Argentina. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi isichotho sinemiphumela emibi ezitshalweni, ngenxa yokucekelwa phansi kwamaqabunga nezimbali ngenxa yomthelela wazo. Ngakolunye uhlangothi, kuya ngosayizi, kungadala ukulimala kwi-windscreen yezimoto nakwezinye izingqalasizinda. Konke kuncike ekujuleni nasayizi wayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesichotho nokuthi sakhiwa kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isichotho
IMontes de León